Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB Flash Drive on Mac
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB Flash Drive ee Mac
Drives USB flash sidoo kale waxaa loo yaqaan drives qalinka, drives muhiim ah ama si fudud sireed. A flash waa qalab kaydinta habboon la qaadi karo oo awood aad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka mid computer si kale aad u fudud. Waxaad iyaga ku shuban kartaa kombiyuutar kasta oo leh dekedda USB ah. Sidaas, dhammaan faylasha aad u muhiim ah iyo xogta waxay noqon kartaa in aad qaadato waqti kasta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sidoo kale qaar ka mid ah shilalka ku dhacay flash drive USB ah sida kombiyuutaro. Haddii aad dareentid in aad USB flash drive kharribmay, formatted ama faylasha ayaa tirtiray sida xaaladahan soo socda:
Ka dib markii files ka computer badbaadinayo lama filaan ah u kabihiisa oo sheegay "ma jawaabaya" muddo dheer iyo ka dib in files drive USB aan la akhrisan kartaa sida in madhan ...
Waxaan leeyahay oo dhan shaqo aan ku flash aan drive iyo dhammaan lama filaan ah oo aan computer waxaa ii sheegin in ay la aqrin! Ma doonayo in reformat flash ah. Waxaan doonayaa inuu ka soo kabsado files aan. Tani ma suurto gal ah?
Ha argagixin! Waxaa jira USB flash kabashada drive Mac barnaamijyada la heli karo si uu kaaga caawiyo in aad keeni USB flash drive dib u soo nooleeya. Halkan aynu leeyihiin isku day la Wondershare Data Recovery for Mac . Raac si aad u hesho dib uga USB flash drive files oo dhan. Kaliya u baahan tahay xoogaa tallaabooyin ah.
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo barnaamij ku saabsan Mac, xiriiriyaan USB flash drive la Mac ah, ka dibna waxay doortaa "masaxay Recovery File" in ay dib u hesho files lumay.
Halkan waxa aad ku arki kartaa in aad USB flash drive waxa lagu ogaan karaa barnaamijka. Waxaa Dooro iyo weeraray "Scan" si ay u bilaabaan helo files lumay.
Kadib markii geedi socodka iskaanka buuxiyey, dhammaan faylasha dib u helay waxaa loo kala saaraa waddooyinkiisa asalka ah ee liiska bidix ee interface ka. Haddii aadan rabin inuu ka soo kabsado iyaga oo dhan, aad eegista ay dib ugu heli mid aad rabto adigoo hubinaya. Oo weliba waxa kale oo aad iyaga ku eegaan karo ka hor inta sameeyo dib u soo kabashada haddii faylasha aad doonaysid in aad ka soo kabsado yihiin sawiro (qaabab ee JPG, TIFF, PNG, BMP iyo GIF), PDF files, HTML (HTM) ama ZIP archives. Dooro faylasha aad rabto inaad ka soo kabsadaan oo ka dhacay Ladnaansho iyaga badbaadiya aad Mac.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan heli karin faylasha sida aad doonayso inaad by this "masaxay Recovery File", waxaad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery", kaas oo kaa caawin kara in iskaan qoto dheer si aad u hesho files lumay dheeraad ah oo gebi ahaan, iyo sidoo kale waxay u baahan tahay waqti dheeraad ah u iskaanka.
Video tutorial ah Mac flash USB kabashada xogta drive